Mpanamboatra sy mpamatsy plastika vita amin'ny plastika china pearlescent | Chenyu
Ny lokon'ny tontonana vita amin'ny alimina vita amin'ny perla dia mitovy amin'ny lokon'ny fanovana loko voajanahary. Araka ny karazana pigment sy ny zoro fizahana, ny hazavan'ny halavan'ny halavan'ny halavany dia hita taratra any aoriana, ka vokatr'izany dia miovaova hatrany ny lokon'ny lokony sy ny fisongadinan'ny loko avana. Ny fisehoan'ny takelaka aluminium-plastika vita amin'ny perla dia ny molotra mofomamy ho an'ny haingon-trano. Ny loko mamirapiratra dia manome lanja ny famolavolana maritrano ary manampy koa ny tontolontsika.
3. Ny tontonana vita amin'ny alimina pearlescent dia mateza tsara, fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny hamandoana, fanoherana ny nify, fanoherana ny hafanana ary fanoherana ny toetrandro.
4. Miaraka amin'ny vokany mamiratra sy mamirapiratra, ny tontonana vita amin'ny aliminioma manjelanjelatra dia manome fahatsapana an-kolaka sy kanto.
Izy io dia mety indrindra ho an'ny haingo anatiny sy ivelany, rojo ara-barotra, doka fampirantiana, fivarotana fiara 4S fiara ary haingon-trano hafa ary aseho amin'ny toerana ampahibemaso.
Tsy mitazona ny toetra mampiavaka ny akora fototra fotsiny izy io, fa mandresy ihany koa ny akora fototra tsy ampy, ary nahazo fananana ara-nofo tena tsara. Toy ny haingo mirentirenty sy tsara tarehy, tsara tarehy sy maro loko; fanoherana ny toetr'andro, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny afo, fanoherana ny hamandoana, fanamafisam-peo, fanamafisana ny hafanana.
1) Fampiasana akora sy teknolojia simika kalitao avo lenta mba hikarakarana simika ny velaran'ny coil aluminium, mamorona sarimihetsika tantely tantely tantely ambonin'ilay coil aluminium, ka ny loko sy ny coil aluminium dia mitambatra amin'ny alàlan'ity mpanelanelana ity, ary mahazoa adhesion tsara.
2) Ny coating dia mampiasa milina fametahana rojom-pandrefesana iraisam-pirenena mandroso iraisam-pirenena, izay manamboatra fonosana mazava tsara amin'ny fanjakana mihidy sy tsy misy vovoka, mba hifehezana tsara ny hatevin'ny sarimihetsika manarona sy ny kalitaon'ny fisehoana; ny lafaoro dia mizara ho faritra efatra hifehezana ny hafanana sy hanendasana.
Teo aloha: Andiana veneer vita amin'ny alimina